Huawei MediaPad M3 ga-abata na USA ma ọ dịlarị na Europe | Akụkọ akụrụngwa
N'ime IFA 2016 gara aga, Huawei nwere obi ụtọ igosipụta ọtụtụ ngwaọrụ ọhụụ ga-eme ka ndụ anyị dị mfe, ma ọ bụ opekata mpe ịnwe ọ entertainụ. N'ụzọ dị otú a, ha gosipụtara Huawei MediaPad M3, mbadamba nkume nke nwere ngwaike zuru oke na nke siri ike, nwere atụmatụ mara mma nke ukwuu na ebumnuche na anyị nwere ike iri ọdịnaya niile anyị chọrọ iji ike ya rụọ ọrụ. Nke a bụ ọhụrụ Huawei mbadamba na obi ọgụ quality-price ruru na ị nwere ike ịzụta site ugbu a. Mana na United States of America, ọ bụ ebe ha ga-eji aka ha nabata Huawei kacha ọhụrụ, ya na MediaPad M3, T1 7.0 na T1 10.0.
Ọ ga-abụ izu a mgbe ngalaba mbụ malitere ịnata na United States, ka ọ dị ugbu a, site na Spain ị nwere ike nweta ya na ọkacha mmasị gị na-eweta ma ọ bụ site na Amazon. Mana ka anyị kọwaa, anyị enweghị ike ikwu maka etu mbadamba nkume si dị mma na-egosighi njirimara ya.
O nwere igwe Kirin 950 nke sitere na Huawei, ya na ihe ozo 4GB nke RAM nchekwa. Maka nchekwa dị n'ime anyị ga-enwe ngụkọta nke 32GB. Ihuenyo ahụ adịghị anya n'azụ, ọ na-ahapụkwa anyị mkpebi nke 2560 x 1600 pikselụ. Banyere igwefoto, ihe na-achọ ịmata ihe, 8MP maka azụ na azụ, otu iji mee ka anyị pụọ n'ụzọ na ndị ọzọ ka ọkpụkpọ vidiyo nwere mma kacha mma.
Nwere ike nweta ya na Amazon maka ihe dị ka € 450, ma ọ bụ ị ga-echere ruo izu ọzọ ma ọ bụrụ na ị bi na United States of America. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịbụ nsogbu ahụ, na Apple na-enye ahụmịhe karịa (ọ bụ ezie na njirimara nhazi ka njọ) na iPad ya, ị nwere ike ịnweta iPad Air 2 na Storelọ Ahịa Apple maka ihe na-erughị € 400. Ihe niile ga - adabere n'ụzọ ịchọrọ ijikwa ọdịnaya gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ gam akporo ma ọ bụ iOS dịka sistemụ arụmọrụ gị n'ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Huawei MediaPad M3 ga-abata na USA ma ọ dịlarị na Europe
A kwụsịtụrụ Robot Project ruo mgbe ọkwa ọhụụ maka enweghị ọgụgụ isi